Yomiselela ipasipoti ngemva komshado libhekisela esikhundleni unscheduled idokhumenti eyinhloko isakhamuzi. Ngemva komshado inqubo kudingekile ukubhalisela kudlule umlingani ngubani washintsha igama lakhe. Uma lo mbhangqwana kwadingeka igama oshadile, ezahlukene kusukela umyeni odlule futhi igama lomkakhe, iphasipoti kuyadingeka ukushintsha bobabili abashadile.
Kungani kudingeka ipasipoti esikhundleni emva komshado
Abanye abantu abakuthandi ugijimele hhayi ahlukane imibhalo emidala. Futhi by the way, ngokuvumelana nomthetho passport esikhundleni ngemva komshado kufanele kwenzeke enyangeni eyodwa kusukela ngosuku lo mshado. Ngemva kokuphela kwalesi sikhathi, passport ubudala kubhekwa isibhakabhaka, futhi isakhamuzi Russian Federation akasenawo ilungelo lokusebenzisa le dokhumenti. Futhi, ngenxa yalokho, awukwazi ukuthatha udumo, ukuze zikhiphe imali akhawunti lokonga, ithikithi isitimela noma ibhanoyi.
Futhi uma isikhalazo isakhamuzi ukuba ehhovisi ipasipoti ekupheleni kwezinsuku ezingama-30, kulindeleke ngumuntu esihle kuze ruble 2500.
Ukubuyiselwa passport ikhishwa emshadweni emahhovisi indawo ye-Federal Migration Izikhungo. Ukwephuza ukuthola idokhumenti entsha incike onjani ukwahlukana ithuba isakhamuzi: endaweni yokuhlala - esiyizinsuku ezingu-10, ngaphandle ukwelashwa emphakathini - kufika ezinyangeni ezimbili.
Umsebenzi obekwe umbuso ngoba le sevisi ruble 200. Yomiselela ipasipoti ngemva komshado Kwenziwa emva iphakethe madokumende alandelayo:
Isitatimende Ifomu H1;
iphasiphothi izithombe ezimbili 35 × 45, umbala noma omnyama nomhlophe;
iphasiphothi ubudala, wojeziswa ashaqe;
isitifiketi zokubhalisa kanye namanye amaphepha emvume ukuqinisekisa amamaki passport: Isitifiketi sokubhaliswa, izitifiketi zokuzalwa kwezingane nabanye;
isitifiketi sokushintsha igama;
Igama elithi ukubhaliswa kwe-passport iqala kusukela ngosuku Federal Migration Izikhungo yonke imibhalo. Uma zokukhokha zidlulile, kanye passport entsha kungenjalo, kuzomele usifaka kanjani isikhalazo inhloko ehhovisi iphasiphothi.
Ukubhaliswa namanye amadokhumenti
Yomiselela ipasipoti ngemva komshado uma ushintsho yegama kuphela isinyathelo sokuqala, kodwa-ke ngeshwa, hhayi oyedwa kuphela. Idinga Nokho ukushintshashintsha imibhalo abaningi, kakade ngaphandle ishesha. Kodwa, sicela uqaphele ukuthi ungase uhlangabezana nezinkinga lapho edlulisa amagama ipasipoti kanye nezinye ungubani. Ngakho okokuqala kufanele njalo kwenziwe ngendlela esikhwameni esitifiketini sokubhaliswa komshado njengobufakazi bokuthi ungubani. Uhlu kwemibhalo ukushintshwa, kunalokho enkulu, futhi kufanele uthole passport, ilayisense, i-VAT, isitifiketi umshwalense, inqubomgomo MHI, amakhadi okuthenga ngesikweletu nokushayela ncwadi ebhange. Ukuze ukuqoqa wonke usizo futhi ukuze uthole amadokhumenti amasha kuyodingeka ichithe isikhathi esiningi nokuzikhandla, ngakho-ke, kuyaqondakala ukuthi izintokazi eziningi zanamuhla ufuna ukugcina igama elidala.
Kodwa akunjalo scary, ngoba uma wena ushintshe amagama akudingeki ashintshe ncwadi umsebenzi, kodwa umane ukwazisa umqashi mayelana nalolu shintsho kolwazi iphasipoti, futhi akudingeki ukuba ushintshe isitifiketi sobunikazi. Futhi ikakhulukazi akudingeki ukushintsha idiploma noma ezinye iziqu.
HACCP - kuyini? I HACCP izinga uhlelo: Izimiso, ukuqaliswa, ukuqeqeshwa, isitifiketi
Ukudala HOA - avelele